Vao avy notendrena ny masoivoho alemanina any Sina dia maty tampoka: fanadihadiana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Vao avy notendrena ny masoivoho alemanina any Sina dia maty tampoka: fanadihadiana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Safety • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Nanao fianianana izy ho masoivoho alemanina farany tamin'ny 24 aogositra, ary fantatry ny tanana ankavanan'ny Chancellor Merkel. Fa maninona izy no maty androany? Mangina ny manampahefana Alemanina momba ny toe-javatra, noho ny fanadihadiana mbola miandry.
Jan Hecker, masoivoho alemanina vao notendrena ho any China dia maty ny alatsinainy maraina tany Beijing
Ny tsiambaratelo momba ny deasth nataony dia tsiambaratelo hatrizay, ary anaovan'ny Minisitry ny raharaham-bahiny alemana fanadihadiana.
Voatendry ny 24 aogositra ny masoivoho Hecker, namela ny vadiny sy ny zanany telo lahy rehefa maty androany 54 taona.
vao mba tao amin'ny masoivohon'ny masoivoho nandritra ny andro vitsivitsy. Ilay 54 taona teo aloha dia niasa ho mpanolotsaina momba ny politika ivelany ho an'ny Chancellor Alemanina Angela Merkel.
Ny faran'ny volana aogositra vao notendrena ny masoivoho Hecker. 54 taona izy ary nandao ny vadiny sy ny zanany telo.
Ny masoivohon'i Alemanina any Sina dia iray amin'ireo olona atokisana akaiky indrindra ary mpanolo-tsaina ny fiarovam-pirenena handao ny Chancelior Alemanina Angela Merkel.
Andro vitsy lasa izay dia hita fa naneho firaisankina tamin'ny mpiara-miasa aminy Litoanianina izy.
"Alahelo sy famoizam-po lalina no nahafantaranay ny fahafatesan'ny masoivoho alemana tany Chine tampoka," hoy ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny alemana tamin'ny fanambarana ny alatsinainy teo.
"Ny eritreritsika amin'izao fotoana izao dia ny fianakaviany sy ireo olona akaiky azy."
Ny biraon'ny raharaham-bahiny any Alemana dia tsy nanambara ny zava-misy tao aorian'ny fahafatesan'ny diplaomaty.
Andriamatoa Hecker dia mpisolovava sy mpitsara teo aloha.
Nihaona tamin'ny filoham-pirenena amerikana Biden sy Chancellor Merkel tao amin'ny G7 izy.
Hecker toa “Sambatra ary tsara” nandritra ny hetsika nokarakarainy tao an-tranony tany Beijing ny zoma lasa teo, nilaza tamin'ny masoivohom-baovao Reuters ny iray tamin'ireo vahiny.
Nandritra ny fampahafantarana ny masoivohon'izy ireo faha-14 tany Sina, ny masoivoho alemanina dia nilaza fa ny tanjony voalohany dia ny hiantoka ny "fampandrosoana maharitra sy maharitra ny fifandraisan'i Alemania-Sina… ho tombontsoan'ny vahoaka ao amin'ny firenena roa tonta."
Voalaza fa nikasa ny hiverina any Alemana izy ary hanohy hiara-miasa amin'ny chancellor mandra-pahatapitry ny fe-potoam-piasany. Saingy, noho ny "toe-draharaha diplomatika" vao haingana, izay angamba mifandraika amin'ny fanjanahana Taliban an'i Afghanistan, nanapa-kevitra ny governemanta federaly fa ny "Masoivoho Alemanina ao Beijing dia tsy maintsy miantoka ny fahombiazany. Nandidy azy hijanona ao Beijing i Alemana.